Hirstory of Christian Bale - Batman သရုပ်ဆောင် မင်းသား (့ Batman - Dark Knight ) ~ ITmanHOME
16:36 နိုင်ငံခြားကားတွေ ကြည့်လို့ရမယ်2comments
Hirstory of Christian Bale - Batman သရုပ်ဆောင် မင်းသား (့ Batman - Dark Knight )
လေထိုးရုပ်လား အောက်မေ့ရတယ်။ တတ်လဲ တတ်နိုင်ပါပေ့ Christian Bale ရယ်..... xD
Sai Tun Nyi: The Machinist နဲ့ Batman Begins ကြားမှာ တစ်နှစ်ဘဲ ကွာတယ်.. တကယ်တမ်း Bale က ၆လဘဲ လေ့ ကျင်ချိန်ရခဲ့ တယ်.. ၆လ လေ့ကျင့် လိုက်တာ.. 105kg ဖြစ်သွားလို့ Batman Begins ရိုက်ခါနီး ဒါရိုက်တာ လိုချင်တဲ့ 86kg ရအောင် ပြန်လျော့ ခဲ့ ရပါသတဲ့ .. :D
Sunday at 03:00 · · 8
LitTle KiRa: မိုက်တယ်...... နာလည်းအဲ့ရိုဖြစ်ချင်လိုက်တာနော်.....
Sunday at 03:09 ·
LitTle KiRa- ‎:P
David Strike: ‎55kg ကနေ 86kg... ဒါဆို ငါလဲ မျော်လင့်ချက်ရှိတာပေါ့နော်... :D
Sunday at 03:22 ·
Billy Hanna: နှုတ်ခမ်းမွှေးတောင် အစစ်မထားနိုင်၊ ဆံပင်ပုံလေးတောင် မပြောင်းနိုင်တဲ့ မြန်မာသရုပ်ဆောင်များ ဒါမျိုးကြတော့ အတုမယူကြဘူးကိုး ... ပြောလိုက်ရင် နည်းပညာကလွဲရင် ကျန်တာယှဉ်နိုင်တယ်ဆိုပဲ ဝါးဟားဟား
Sunday at 04:20 · · 38
ပင်လယ် နတ်သမီးလေး- ကွာချက် :-)
Sunday at 05:46 ·
Nan Waddy : C Bale ကိုအရမ်းချစ်:)
Sunday at 08:07 · · 2
Mg Hnin Maung: C bale..သင်တန်း ဖွင့်စားရင်တော့ထောပြီ...
Sunday at 10:46 · · 1
Yan Naing: ရုပ်ရှင်တစ်ကားအတွက် ဒီလောက်တောင် အပင်ပန်းခံတယ်နော်။ ကိုယ့်အလုပ်ကို တော်တော်လေးစားတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲ။
Sunday at 12:50 · · 5
Rescue Dawn ကပိုပီပြင်တယ်။ အဖမ်းမခံရခင် စစ်သဘေ်ာပေါ်မှာတုန်းက ခပ်တောင့်တောင့်ပဲ။ ဖမ်းပြီးကြာသွားတော့မှ အဲ့လို ပိန်ပိန်လေးဖြစ်သွားတာ။ တော်တော်ကောင်းတယ်။ သရုပဆောင်တင်မဟုတ်ဘူး။ အားလုံးကို ပီပြင်အောင်လုပ်တယ်။ ဗမာကားကျတော့ အဲ့လိုလေ့ကျင့် ဒါမှမဟုတ...် ကြိုးစားကြလည်း ဈေးကွက်မှ သိပ်မရှိတာ။ မကောင်းတာကို မကြည့်ကြတော့ ဈေးမရ ဈေးကွက်မရှိ။ ဈေးကွက်မရှိတော့ ဈေးမရတော့ ကောင်းကောင်းမရိုက်ကြ။ သို့သော်လည်း ရိုးရိုးကြီးဇေယျ တို့ အေ၀မ်းဦးခင်မောင်၊ အေ၀မ်းဦးတင်မောင် တို့ ၀င်းဦးတို့တုန်းကတော့ တော်တော်ကောင်းကြပါတယ်။ ကြည့်ရတော့ ရုပ်ရှင်သမားရော ပိရိသတ်ရော ညံ့ကုန်ကြတာနဲ့တူပါတယ်ဗျာ။
Sunday at 13:02 · · 1
Win Lwin Htay: Oops! သူက အပိန်ဆုံးအချိန်မှာတောင် 55kgတဲ့ တားတားက ခု 45KG :(((((
Sunday at 13:30 · · 2
Pyae Phyo: ငါလည်းဝိတ်လျှော့ရမယ်
Sunday at 14:00 · Edited · · 2
Khine Thinzar Cho: Awesome
Sunday at 14:18 · · 1
Lone Lone TheRocker: ရဲတိုက်ရဲ့ ပရိတ်သတ်မဟုတ်ပေမယ့် သူ့ရဲ့ဆံပင်စတိုင်ကို တစ်ကားနဲ့ တစ်ကား မတူအောင် ရသလောက် ပြောင်းပြောင်းပေးတာကိုတော့ သဘောကျတယ်.. ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြင်ပြောင်းတာပေါ့...
Sunday at 15:28 ·
Hnin Lei Phyu: Christian Bale စကားသာ မပြောနဲ့...အကုန်ကြိုက်တယ်....
Htoo Myat: my favorite actor !!!
Monday at 11:59 ·
18 May 2013 at 06:22 Reply
my web page; Online Batman Games
18 May 2013 at 14:00 Reply